Warar Sir ah oo aan ka Helay Jwxo-shiil iyo Kooxdiisa! – Rasaasa News
Warar Sir ah oo aan ka Helay Jwxo-shiil iyo Kooxdiisa!
Jul 3, 2010 Warar Sir ah oo aan ka Helay Jwxo-shiil iyo Kooxdiisa
Nairobi – [Kenya July 2, 2010] – Digniin, Jwxo-shiil iyo qaar ka mid ah kooxdiisa jabatay, ayaa yeeshay kulan khadka telefoonka ah [teleconference], waxayna isku war galiyeen in laggaga adkaaday dhinicii siyaasada iyo dhinaca bulshadaba arina ay la gudboon tahay.
Jwxo-shiil oo ah ninka ay talada kooxdiisu ka go,odo ayaa isaga oo la tashaday beeshiisa waxaa uu jeediyey in ay sameeyaan talooyin is daad raacis ah oo uu ugu talo galay in uu ku waxyeeleeyo ururka ONLF ee nabada qaatay, Jwxo-shiil wuxuu yidhi “UWSLF heshiiskoodu nama waxyeelayn, laakiin ONLF, lama kala yaqaan oo khalad badan baa dhacay”.
Jwxo-shiil, mar uu kooxda qaarkeed la hadlayey ayuu ku hanjabay in uu meel kaga soo hadhi doono xubnaha ONLF ee qaatay heshiiska. Hadalkaas Jwxo-shiil waxaa uu ula jeedaa in la dilo qaarkood xubnaha ONLF ee qaatay heshiiska nabada, kuwooda dagan dalalka reer galbeedka.
Qaar ka mid ah kooxdiisa ayaa waydiiyey waxa ururka burburiyey waa dilkii Dr. Dolal, dadka heshiiska qaatayna waxay u badan yihiin reerkiisii hadii aynu waxyeelo gaadhsiino sow arintii jirtay Budo caydhiin kuma sii darayso?
Jwxo-shiil, wuxuu ku jawaabay adeer cudurku wuu kulul yahay waxaana lagu daaweeyaa daawada oo kulul “dab” si la mid ah dhibaato dhibaataa daawo u ah.
Jwxo-shiil, ayaa soo jeediyey qodobadan kooxdiisuna way la qaadatay, waxayan arinta ka bilaabeen Maraykanka iyo Bariga Afrika;
1. ONLF-ta heshiiska qaadatay waxaa u badan hal beel beelaha kalena been bay u sheegeen, waa in beesha dhaxdeeda si hoose la isugu diro, madaama ay raga hawsha wadaa u badan yihiin dhalinyaro aan waayo arag ahayn.
2. Waa in xubno culculus oo inaga mid ah ay iska dhigaan wax goostay, iyagana ay ku biiraan, kolka la meeleeyana waa in ay dadwaynaha ka dhaadhiciyaan heshiisku in Itobiya uu dhab ka yahay baanu moodaynay laakiin khayaano ayey wadatay.
3. In raga Culimo ah oo reerka Dr. Dolal ah, oo ay dadku u soo joogsan karaan la hawl galiyo, si uu nidaam diini ah dadka wax ugu sheego, dadka noocaas ah waa in aynu u samaynaa lacago lagu soo jiidanayo si ay inoogu shaqeeyaan. Wuxuu yidhi Jwxo-shiil “beel lalama dagaalamo ee iyada ayaa la isku diraa sida ay Itobiya inoola dhaqanatay”.
4. Jwxo-shiil, wuxuu kooxdiisa ka codsaday in ayna wax hadal ah ama ficil ah ayna ka bixinin waxyaabaha socada, inta ay arimuhu ka kala dagayaan, laakiin qoraalku waa furan yahay hana la badiyo.
Jwxo-shiil wuxuu kooxda kula dardaarmay in ay hirgaliyaan afartaas qodob, mudana ay dulqaataan taladu si fudud ayey gacanteena ugu soo noqon.
Jwxo-shiil, ayay rajo la,aan soo foodsaartay waxaadna moodaa in uu sugayo rajo ah khilaaf ka yimaada ururada wadhadalka nabada la galay iyo dawlada Itobiya. Arintaas oo ah mida uu ka dhur sugayo sida ka muuqata talooyinka uu bixinayo xiligan, hadii ay arintaasi u hirgasho Jwxo-shiil, waxaa dhici doona colaad xoog leh oo u dhaxaysay Somalida oo dhan iyo Itobiya.
Xubno ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil oo Sheegay in Eegga ay ka Go,ayaan Kooxda.
Dadbay Meeli Buktaa